🥇 ▷ Dukaan Ciyaar: Liiska toddobaadkan & barnaamijyada la dhimay & # 039; s ✅
Dukaan Ciyaar: Liiska toddobaadkan & barnaamijyada la dhimay & # 039; s
Toddobaad kasta, waxaa ku yaal liis gareynaya barnaamijyada iyo cayaaraha Dukaanka Play oo helaya qiimo dhimis aad u weyn. Kala goynta qiimaha, ama xitaa helitaanka lacag la’aan.
Sidaas darteed, waxaan hoos ku sharaxi doonaa tartamada laga dhimaayo maanta. Iyo kuwa ay runtii mudan yihiin iibsashada
Laakiin intaas oo dhan ka dib, waa maxay warka aan haysanno toddobaadkan?
1 – HEXASMASH 2 • Halxiraalaha Farshaxanka Kubadda Kubadda ku Ciyaara
80 heerar ficil-koob leh oo heerar dheeri ah soo dhow dhow.
Jawi jidheed oo macquul ah, oo ciyaartoygu awood u yeelan karo inuu isticmaalo xirfadaha sida boodada saxda ah, kala goynta, culeyska iyo inbadan.
Saameynada runtii laga argagaxo iyo sawirada HD-ga wanaagsan.
In ka badan 20 walxood, oo ay kujiraan makaanikooyinka qaarkood oo ay kujiraan wareegaan.
Xakamaynta aad ufiican ayaa ku siinaya fursad aad si sax ah u toogato.
Meelo badan oo dejin ah oo aad ku dheellitiri karto codka, dareenka, ama xitaa qaabaynta sawirada.
9 luqadood oo kala duwan ciyaarta.
100% bilaash ah iyo xayeysiis la’aan.
HEXASMASH 2 • Halxiraalaha Fiisikada ee Shooter Waxay ku kacday $ 0.79. Si kastaba ha noqotee, sicir-dhimista darteed, inta lagu guda jiro 2da maalmood ee soo socota waxay noqon doontaa gebi ahaanba bilaash.
2 – Kaararka
2 nooc oo kontaroolo ah.
Heerar kasta ka dib ayaa u soo muuqan doonta shax ka mid ah dhibcaha ugu fiican halka ay ciyaartoydu kula tartami karaan inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan.
Qiimaha kubbadaha ayaa ku kacaya € 1.19. Si kastaba ha noqotee, sicir-dhimista darteed, inta lagu guda jiro 2da maalmood ee soo socota waxay noqon doontaa gebi ahaanba bilaash.
3 – Terra Fighter 2 Pro
Isu hubee hub kala duwan waxaadna la kulantaa cadaw aad u khatar badan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad si adag ugu tababartaa dabeecaddaada illaa intaad noqon kartid dagaalyahan run ah. Tani waa sababta oo ah kaliya dagaalyahan run ah oo leh qalbi xoog leh ayaa soo geli kara fagaaraha.
Hab sheeko oo buuxa, halkaasoo ciyaartoydu ku bilaabi karaan safarkooda dagaal. La dagaallama xumaanta oo dhan oo si buuxda loo burburiyo ciidanka Cyborg.
Qaabka ‘New Duel’, halkaas oo ciyaartoydu ay wajihi karaan cadawga goobta. Furitaanka 16 ka soo horjeedda oo leh xirfado kala duwan.
Terra Fighter 2 Pro qiimaha $ 0.99. Si kastaba ha noqotee, sicir-dhimista darteed, inta lagu guda jiro 3da maalmood ee soo socota waxay noqon doontaa gebi ahaanba bilaash.
4 – Jiheeyaha Celestial
Haddii aad xiisaynayso cilmiga xiddigiska, tani waxay noqon kartaa dalabka kuugu fiican adiga. Ka dib oo dhan, Soojiidashada Celestial Navigator ayaa la socota oo lagu daray xisaabinta isugeynta iyo kala goynta. Xariiq booska iyo qalad kombuyuutar. Xisaabiye cirro. Xisaabiyaha sixirka jannada. Almanac qorraxda, dayaxa, meerayaasha iyo 58 xiddigood iyo saddex dariiqo oo duulis ah.
Qiimaha Jiidashada Celestial $ 2.79. Si kastaba ha noqotee, qiimo dhimista darteed, 6da maalmood ee soo socota waxay ku kici doontaa oo keliya 1.69 €.
5 – Xisaabiyaha Barnaamika MC50
Uma baahna aqoon barnaamij barnaamij. Taasi waa, dhamaan adeegsadayaasha waxay awoodi doonaan inay rakibaan arjiga oo ay bartaan aasaaska.
Abuur oo keydi barnaamijyadaada, kuwaas oo lagu keydin karo sidii faylal banaanka ah aaladdaada.
Waxaad tafatiran kartaa barnaamijyadaada adoo isticmaalaya tifaftirka qoraalka gudaha ama dibadda.
Amarada dalabka way fududahay in la galo.
Luqadda barnaamijyada si wanaagsan ayaa loo habeeyay.
Luuqadaha Ingiriiska iyo Isbaanishka.
Xisaabiyaha Barnaamijyada ‘MC50 Programmable Calculator’ waa 2.39 €. Si kastaba ha noqotee, qiimo dhimista darteed, inta lagu guda jiro 2da maalmood ee soo socota waxay ku kici doontaa oo keliya 1.59 €.
6 – Mashiinka Dukaanka – Mashiinka Drum Synth
Noocyada 4 qaab oo leh xakameyn qaab maxalli iyo caalami ah.
Ku duub maqal ahaan Wav.
Waad keydsan kartaa oo waad ridi kareysaa alaabooyinka la soo iibsado.
Saddex nooc oo durbaanooyin: -Bass
Qalabka Saameynta: -Irista xawaaraha dabacsan – Yaraynta Bit
Mashiinka Dukaanta loo yaqaan ‘Dragon – Synth Drum Machine’ wuxuu gaarayaa € 2,19. Si kastaba ha noqotee, dhimista darteed, 5ta maalmood ee soo socota waxay ku kici doontaa oo keliya 1.09 euro.
Marka la soo koobo, haddii aad xiiseyneyso inaad iibsato mid ka mid ah dalabyadan liiskayaga ah, waxaa ugufiican inaad iska hubiso. Tani waa sababta oo ah qiima dhimistu waxay soconeysaa kaliya maalmo mana ogaan kartid goorta fursad kale oo sidan oo kale ah la heli karo.
Ka sokow, maxay kula tahay waxaas oo dhan? Ma jeceshahay liistadayada barnaamijyada la dhimay? Nala wadaag aragtidaada fikradaha hoose.